Cheap Nzuzo zọ akpụzi, Die Nkedo akpụzi, CNC lathe machining, Silicone matarasị, China Factory, Manufacturers Ma Suppliers - Dongguan FUYA metal & Plastic Products Co., Ltd.
N'ihi otu ụzọ ụzọ ụgbọelu ikuku, ikuku ikuku dị mma karịa ihe nkpuchi nwere ike ịchụpụ ma dabara maka ogologo oge
Wepu ihe mmezi ma enwere ike igba ogwu site na isi ma ọ bụ mmanya. Ọ na-ewe 7 ụbọchị iji dochie nyo mmewere ozugbo a nkpuchi na-eji ugboro ugboro, nke dị mma karịa KN95Good mma ngwaahịa, kwa ụbọchị iji na-eri adịghị gafere 0,2 yuan, echekwa. (The ngwaahịa na-nyere na 10 iyo ọcha)
Facemụaka nkpuchi ihu
Ngwaahịa ahụ na-ewepụta atụmatụ nke mmiri na nkewa, ikuku na-ehichapụ n'etiti, ikuku na-agagharị na-enweghị atụ n'akụkụ abụọ, nke na-amịkọrọ nke ọma ma na-egbochi isi nyo ahụ.
N'ihi ojiji nke otu ụzọ valvụ imewe, iku ume karịa otu oge izugbe nkpuchi ka mma ruru eru na-eyi ogologo oge.
Ihe mkpado na-abụghị nke Chọpụta
Ejiri PP mee ihe bụ isi nke ngwaahịa ahụ, a na-eji nchara galvanized slingshot mee ihe, a na-ejikwa TPR dị nro.
Akụkụ rọba dị nro nke ngwaahịa a nwere ike belata ncha akara ma ghara imebi uwe ahụ mgbe ejiri akwa ahụ.
Ihe mgbochi mgbapụta
Isi nke ngwaahịa a bụ nke PP, slingshot ahụ bụ POM plastik nchara, isi ọnọdụ clamping bụ nke TPR dị nro.
Ihe nkpuchi sịlịkọn
Enweela akwa ụra ma ọ bụ Simmons na-atụ aro ọkpụrụkpụ kwesịrị ekwesị nke 3-5CM
Ogologo ọkpụrụkpụ nke Simmons Coir maka obere ọkpụrụkpụ bụ 7-15CM
Ogologo osisi ma ọ bụ akwa ọkpọ a tụrụ aro bụ 10-20CM
Ohiri isi Silicone
Emere ohiri isi nke Silicone dị ka ụkpụrụ nke Ergonomics
Ngwaahịa a nwere ike na-asa, igwe saa, elu okpomọkụ disinfection, ka ike gị na-echegbu onwe-free.
Ngwaahịa a bụ antibacterial, mildew-proof, mmiri-àmà, na-abụghị deformation, mgbochi ịka nká.